Hlola iFujairah, United Arab Emirates - World Tourism Portal
Hlola uFujairah, United Arab Emirates
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eFujairah UAE
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeFujairah
Bukela ividiyo ngoFujairah
Hlola uFujairah, ongomunye wabadlali abayisikhombisa abakha i- I-United Arab Emirates. Okuwukuphela kwabayisikhombisa abanogu oluseGulf of Oman futhi akekho kwiPersian Gulf, inhloko-dolobha yalo yiFujairah City. Ingasempumalanga ye-United Arab Emirates, futhi futhi umncane kunabo bonke e-Emirates, kuphela ezimele Sharjah e 1952.
Ukutholwa kwemivubukulo ekutholakaleni kweFujairah kukhomba umlando wokuhlala kwabantu kanye nokuhweba okuxhumanisa okwenzeka emuva okungenani iminyaka engu-4,000, kanye nokungcwatshwa kukaWadi Suq (2,000 kuya ku-1,300 BCE) eBithnah naseQidfa 'Oasis. Kusetshenziswe umbhoshongo wesithathu weminyaka engu-2000 ekwakheni inqaba yesiPutukezi eBidiyah, ekhonjwe ngePutukezi 'Libedia', inqaba eqoshwe kumephu ye-1646 yaseResende - inqaba uqobo lwayo lwenziwe nge-carbon eyabhalwa ku-1450-1670.
UFujairah naye ucebile ezinqabeni zaseSulumani eziphelelwe yisikhathi, futhi nokuba yikhaya mosque wakudala osetshenziswa ku I-United Arab Emirates, I-Al Badiyah Mosque, eyakhiwa ku-1446 ngodaka nezitini. Kuyafana namanye ama-mosque atholakala eY Yemen, empumalanga ye-Oman naseQatar. I-Al Bidyah Mosque inama-domes amane (ngokungafani namanye ama-mosque afanayo aphakathi kwesikhombisa neshumi nambili) futhi ayinayo i-minaret.
Emirate yeFujairah ihlanganisa cishe i-1,166 km2, noma cishe i-1.5% yendawo ye-UAE, futhi ungowokufika endaweni yesihlanu ngobukhulu e-UAE. Inani labantu bakhona elizungeze izakhamizi ze225,360 (e2016); yi-Emirate yase-Umm al-Quwain kuphela enabantu abambalwa.
Isimo sezulu singezikhathi ezithile zonyaka, yize kufudumele kakhulu unyaka. Izinombolo zezivakashi zivakasha nje ngaphambi kwezinyanga zasehlobo.
Amandla ekugcineni aphethwe ngumphathi weFujairah, Ubukhosi Bakhe Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, obephethe ubukhosi kusukela kwashona ubaba wakhe e1975. Kuthiwa uSheikh wenza imali ngokwakhe ngebhizinisi lakhe, kanti nemali kahulumeni isetshenziselwa ukuthuthukisa abezenhlalo nokwenza ubuhle bomuzi, yize kunomehluko omncane phakathi kombuso nomcebo wakhe. Umbusi angenza noma yiziphi izinqumo maqondana nanoma isiphi isici somthetho, yize imithetho yobumbano ibeka phambili.
USheikh nemindeni yakhe esondelene nayo bahola ikhabethe laseFujairah, futhi amalungu ambalwa emindeni yasekhaya ahlonishwayo akha amakomidi okululeka. I-Sheikh kumele ivumelane noma yiziphi izinqumo yikhabhinethi. Ngemuva kokuqinisekiswa, izinqumo ezinjalo zingafakwa emthethweni njengezinqumo ze-Emiri, ezivame ukusebenza ngokushesha.
Umnotho kaFujairah ususelwa kumxhaso kanye noxhaso lukahulumeni wobumbano olusatshalaliswa nguhulumeni we Abu Dhabi (isihlalo samandla e-UAE). Izimboni zasendaweni zihlanganisa usimende, ukuchoboza ngamatshe kanye nezokumbiwa phansi. Ukuqala kabusha emsebenzini wokwakha kwasiza imboni yasendaweni. Kunokuchuma kwezindawo zokuhweba ezikhululekile, okulingisa impumelelo ye Dubai Free Zone Authority eyasungulwa ngaseJebel Ali Port.
Uhulumeni wobumbano usebenzisa iningi labomdabu, abasebenzi bendawo, abanamabhizinisi ambalwa okuvula awabo. Abaningi bendawo basebenza emkhakheni wezinkonzo. Uhulumeni kaFujairah unqabela abantu bangaphandle ukuba ngabanikazi abangaphezulu kwe-49% yanoma yiliphi ibhizinisi. Izindawo zamahhala sezikhulile, ngokwengxenye ngenxa yokuqabuleka kokuvinjwa okunjalo ngaphakathi kwezindawo, njengoba ubunikazi obugcwele bezangaphandle buvunyelwe lapho. UShaikh Saleh Al Sharqi, umfowabo omncane kumbusi, waziwa njengebutho lokuqhuba ezentengiso kwezomnotho.
IFujairah iyichweba elincane elingashisi muntu ngemisebenzi emikhulu yokuthumela eyenzeka nsuku zonke. Izinsizakalo ezihlobene nokuthunyelwa nokuhanjiswa kwemikhumbi zingamabhizinisi achuma kuleli dolobha. Ngenxa yendawo enobungani kwebhizinisi kanye nokukhululeka kokusekelwa okunengqondo, imikhumbi ethengiswayo esuka ePersian Gulf ihange lapha ukuze ithole izinhlinzeko, izindawo ezingaphansi komhlaba, ukulungiswa nokwesekwa kwezobuchwepheshe, izindawo ezitolo kanye nezitolo ngaphambi kokuqhubeka ngohambo olude. Idolobha libuye likulungele ngokwendawo ukwenza imisebenzi ehlobene nensizakalo yemikhumbi.
Uhulumeni waseFujairah ungumnikazi wamasheya omkhulu kwi-National Bank yaseFujairah, ibhange lendawo le-UAE. Ifakwe kwa-1982, i-National Bank of Fujairah (NBF) iyasebenza ezindaweni zamabhange ezinkampani nawezentengiso, ezezimali nokuhweba kanye nezemali. I-NBF iphinde yandisa iphothifoliyo ukufaka izinketho zakho zebhange kanye nezinsizakalo zokuhambisana nomthetho ze-Shariya. I-NBF isekela izimboni ezisukela kawoyela nokuthumela izinsiza, ezokukhiqiza, ezokwakha, ezemfundo nokunakekelwa kwempilo.
Abezinye izizwe noma abavakashi abavunyelwe ukuthenga umhlaba. Izizwe zakwa-Emirati zingathenga umhlaba kuhulumeni, ngemuva kokufakazela ubuzwe bazo. Uma kungekho ndawo efanelekile etholakala ngamahhovisi kahulumeni asemthethweni, ukuthengwa kwangasese nakho kungenziwa, ngentengo ekugcineni enqunywe yimakethe nabantu uqobo.
Phakathi kwemiklamo yezokuvakasha indawo yokuhlala eyi- $ 817m, i-Al-Fujairah Paradise, eduze naseDibba Al-Fujairah, emngceleni osenyakatho we-Omani, eduze neLe Meridien Al Aqah Beach Resort. Kuzoba nezindawo ezi-VNasX ezizungeze ama-1,000 kanye namahhotela, kanti kulindeleke ukuthi wonke umsebenzi wokwakha uqediwe kungakapheli iminyaka emibili.
I-Shekhs izama ukuthuthukisa amathuba wabasebenzi bendawo, ngokuzama ukuheha amabhizinisi ukuthi athole indawo eFujairah nokuphambukisa izimali zeFederal ezinkampanini zasekhaya ngendlela yamaphrojekthi entuthuko.
Ukunakekelwa kwempilo kwethulwa ngohlelo oluxubile lukahulumeni kanye nolwangasese. Izindawo zelashwa mahhala ezibhedlela zikahulumeni wobumbano, kuyilapho abokufika kufanele bakhokhele ukunakekelwa kwezokwelashwa. Uhulumeni kazwelonke uxhasa izibhedlela zombuso futhi axhase ukunakekelwa kwezempilo ngemali engenayo ye-petrodollar. Kunokugxekwa ukuthi uhulumeni akabondli ngokwanele abantu abathola imali encane, okumele bazikhokhele ngokwabo ukwelashwa okubucayi.
Uhulumeni waseFujairah wakhe imitholampilo, eyaziwa ngokuthi “izindlu zezokwelapha”. Le mitholampilo iyalekelela futhi isize ekunciphiseni umthwalo esibhedlela esikhulu seFujairah ngokuvumela ukuqashwa kokuhamba nokunikezela ngezinsizakalo zokwelashwa ezihambisanayo. Le mitholampilo seyiphumelele, ivakashelwe yiningi labantu bendawo.
Ukuhamba uzungeze i-Fujairah kanye namadolobhana aseduze Khor Fakkan, UKalba noMasafi benziwe lula ngokuthuthukiswa kwemigwaqo emikhulu yesimanje selokhu yazimela e1971. Imigwaqo emikhulu ixhaswa nguhulumeni wobumbano ngokuqondile, futhi izinkontileka zenziwa maphakathi naphakathi. Lokhu kwenzelwa ukuvikela ikhwalithi kanye nokulethwa kwezinkontileka kanye nokuvikela inkohlakalo ekonakaleni ukwakhiwa.
IFujairah inezithuthi zomphakathi ezinqunyelwe kakhulu, nezinsizakalo zebhasi elilodwa ezisebenza ngaphakathi kwe-emirate kanye nensizakalo esebenza eDubai. Ngaphandle kwezothutho lwangasese, kunenqwaba yamatekisi asetshenziswa yiFujairah Transport Corporation ephethwe nguhulumeni.
Indlela entsha yokuxhumanisa i-Sheikh Khalifa Dubai kanti neFujairah City yethulwe ngokusemthethweni ngoMgqibelo, ngoDisemba 4, 2011, kulandela ukubambezeleka kosuku lokuqala lokuhlelwa kukaJulayi 2011. Kungumgwaqo unciphisa ibanga nge-20 ukuya ku-30 km. Isikhumulo sezindiza iFujairah International Airport siseduzane nedolobha, esikhulu i-falcon isifanekiso esikhumulweni sezindiza ukuzungeza. Noma kunjalo, okwamanje kunikezela ngesevisi yokuthengisa kuphela Abu Dhabi, indawo yokuhlala ngaphakathi kwe-UAE.
LuLu Mall Fujairah wavula ku-2014.
ICity Center Fujairah yavula ngo-Ephreli 2012 ngamayunithi we-105
I-Century Mall eduzane namachweba weFujairah.
Isikhungo Sokuthenga seFathima eFujairah.
Isiko le-UAE ikakhulukazi lijikeleza inkolo yamaSulumane namasiko ama-Arabhu. Ithonya lesiko lamaSulumane nelama-Arabhu ekwakhiweni kwalo, umculo, okokugqoka, okudla kanye nendlela yokuphila ligqame kakhulu. Izikhathi ezinhlanu nsuku zonke, amaSulumane abizelwa emthandazweni ezivela kuma-minarets ama-mosque asakazekele ezweni lonke. Kusukela i-2006, impelasonto ibe nguLwesihlanu-uMgqibelo, njengesivumelwano phakathi kobungcwele bangoLwesihlanu kumaSulumane nangempelasonto yaseNtshonalanga yoMgqibelo-ngeSonto.
Ukuphuza utshwala kuvunyelwe emahhotela aqokiwe, nakumabha ambalwa.
Amaqembu wentsha yase-Emirati ajwayele ukuhlangana ndawonye emigwaqweni nasemakhofi noma emidlalweni yangaphandle yamabhisikidi, kumabhayisikobho nezamabhasikidi amancane. Akujwayelekile ukubona amaqembu ahlanganisiwe ngokobulili ngenxa yokuhlukaniswa kobulili emphakathini we-Emirati.
Ngezikhathi zokuphumula, izakhamizi eziningi zeFujairah ziya emazweni asentshonalanga anjengeDubai ne-Abu Dhabi, ngenhloso yokuzijabulisa nokuyothenga. Baphinde bavakashele iWadis ezungeze abathuthele ekuhambeni ngamatende nasekuhambeni izintaba. Ngasikhathi sinye, ezinye izakhamizi zase-Emirates zivakashela iFujairah ngezinhloso zokuphumula futhi ziqhume lapho kushisa khona ugwadule. Ama-Watersports aya ngokuya ethandwa kakhulu phakathi kwalapha bendawo nezivakashi. Izibonelo zezindawo ezinamanzi yi-jet skis, ukuvunguza komoya, ukushushuluza kwamanzi kanye nokuntywila emanzini. Abafundisayo bokuthungela amakhono bangatholakala eLe Meridien noma eRoyal Beach Hotel, lapho umuntu angathola khona ilayisense le-Diving International, ngemali ethile.
Naphezu kwendawo yayo, kuncane kakhulu ongakubona edolobheni laseFujairah. Idolobha liyisikhungo sebhizinisi kuqala nokuphambili, ngaphandle kwesimo sokuheha kwamanye amadolobha amakhulu e-UAE.
Okuthakazelayo yinqaba ethile, engaphandle komuzi uqobo. Isakhiwo esikhulu sisaqhubeka nokulungiswa kabusha, kepha izivakashi zingahamba zizungeze isiza esikhulu (mahhala). Uma kuqhathaniswa nezinye izinqola ezise-UAE, noma kunjalo, uFujairah Fort ungumzala ompofu; kodwa-ke kukhona nomnyuziyamu nawo (uvaliwe ngoLwesihlanu. Umuzi wamagugu ungcono kunowongenayo Hatta futhi ivulekile i-Sat-Thu 8am-6: 30pm, Fri 2: 30pm-6: 30pm nemali yokungena.
Maphakathi nedolobha kukhona iSheikh Zared Mosque, i-mosque enkulu yama-2nd e-UAE evule muva nje.
Eduze kwe-30 km enyakatho neFujairah ungabona mosque wase-Al Badiyah, mosque elidala kunawo wonke e-UAE, elincane kodwa kufanele nakanjani ulibone. Ungahamba lapho ngebhasi noma ngetekisi. Endleleni ebuyayo ungamisa eKor Fakkan, lapho ungathola khona enye yezindawo ezidume kakhulu kule ndawo namabhishi amahle
I-Archaeology ye-United Arab Emirates
I-Khor Fakkan (isigcino saseSharjah) inconywe kakhulu, njengoba ugu lubhekwa njengenye yezindawo ezihamba phambili esifundeni.
Ukushayela udabula ezintabeni zaseHajar (ezinwebelana umngcele ungena e-Oman) nakho kungajabulisa.
Idolobha laseFujairah ngokwalo alakhelwanga kakhulu abantu abahamba ngezinyawo, ngoba liphethwe yimigwaqo emikhulu. Ngenhlanhla, amatekisi, aguqulwe ngokuphelele abe yimikhumbi emisha yeNissan Altimas neToyota Camrys, anamamitha amaningi, futhi maningi. Eqinisweni, izivakashi ezizama ukuhamba edolobheni zizoheha ukudonswa kwezimpondo kubashayeli bamatekisi, abangakholelwa ngokuphelele ukuthi ukhona umuntu ozokhetha ukuhamba.
Idolobha laseDiba eliyi-30km kude nedolobha laseFujairah kuyisinqumo esihle, lapho ungathokozela khona amabhishi anelanga futhi ungazijwayeza ukwenza imisebenzi yasolwandle oyithandayo. Enye into ethokozisayo ongayenza ukuthi ungathatha uhambo lwesikebhe lokuya kwesinye seziqhingi eziningi eziseGulf of Oman, izindawo ezinhle ngempela ongazivakashela futhi iyindawo enhle yokudoba. I-Fujairah ingesinye sezindawo ezinhle kakhulu ze-Scuba Diving e-UAE, Ukudonsa eFujairah kugcwele amakhorali nempilo yasolwandle. Kukhona neminye imikhumbi emincane yemikhumbi. Noma ngabe uqinisekisile ukuthi uhlukene noma uqala nje ukufunda ujabulela amanzi weFujairah oLwandlekazi i-Indian.
Zonke izinto ezibhekwayo, iFujairah cishe ilungeleke kakhulu njengesisekelo ukusuka lapho ungahamba khona uya ezindaweni eziseduze (iningi lazo elibizwa ngeSharjah), kunokuba wenze okunye. Idolobha liyakhula njengendawo lapho kuzosetshenziselwa ibhizinisi, ikakhulukazi lapho kukhulunywa khona uwoyela, kepha ezokuvakasha zihlala ngandlela thile ngemuva uma ufuna ukuhlola iFujairah kuphela kuzoba uhambo olufushane.
I-souk yendawo ivame ukuthengisa imikhiqizo yabahlali (izitshalo, izinongo njll) kunokuba kuthengiselwe izivakashi. Isifihlo esincane sivulekile eduze kwaseCorniche kusihlwa, kodwa okugxilwe kakhulu kukho kwezimpahla zohlobo oluthile - kanye namakhophi ezinto zegama lomkhiqizo.
Okokukhumbula, amahhotela amaningi asezingeni eliphakeme okungenani anesitolo esisodwa sezipho ngokuhlelwa okujwayelekile kwezinto. Amanani akwaxoxiswana ngakho futhi athambekele ekugcineni okuphezulu kwesibuko.
Azikho izikhala zalapha ekhaya lapho kufinyelela khona isiphuzo, okusho ukuthi ukuqoqwa okujwayelekile kwamanzi, iziphuzo, itiye, ikhofi neziphuzo ezithambile zitholakala kalula.